FALANQAYN: Maxaa u saxan maxaase ka khaldan warka ay Madashu ku sheegtay ”xiriir ka dhexeeya” NISA & Shabaab?! | Hadalsame Media
Home Maqaallada FALANQAYN: Maxaa u saxan maxaase ka khaldan warka ay Madashu ku sheegtay...
FALANQAYN: Maxaa u saxan maxaase ka khaldan warka ay Madashu ku sheegtay ”xiriir ka dhexeeya” NISA & Shabaab?!
(Hadalsame) 29 Abriil 2020 – Warqad kasoo baxday Madasha Xisbiyada Qaran oo lagu hagaajiyey Madaxda DF ayaa lagu sheegay walaac looga muujiyey “inuu xiriir ka dhaxeeyo” Sirdoonka Qaranka NISA iyo xubno ka mid ah ururka Al-Shabaab, waxayna dalbadeen in baaritaan madax banmaan lagu sameeyo waxa labada dhinac ka dhexeeya.
“Madasha waxay aad ugu walaacsan tahay xogaha iyo warbixinnada baryahan soo batay ee ku saabsan xiriirka iyo wadashaqeynta ka dhaxeeya Hay’adda Sirdoonka iyo Nabad Sugidda Qaranka (NISA) iyo ururka argagixisada ah ee Al-shabaab, xogahaas oo dhaliyay shaki iyo cabsi ku abuurmay shacabka Soomaaliyeed,” ayaa lagu yiri qoraalkan Madasha kasoo baxay.
Hoos ka eeg warqadda oo dhamaystiran
Ku: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya,
Ku: Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya,
Ku: Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya,
Ku: Ra’isulwaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya,
Ku: Xeer Ilaaliyaha Qaranka Soomaaliya,
Madashu waxay qoraalkan la wadaagaysaa madaxda kor ku xusan iyo dhammaan dhacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan.
Madasha Xisbiyada Qaran waxay aad ugu walaacsantahay xogaha iyo warbixinnada baryahan soo batay ee ku saabsan xiriirka iyo wadashaqeynta ka dhaxeeya Hay’adda Sirdoonka iyo Nabad Sugidda Qaranka (NISA) iyo ururka argagixisada ah ee Al-shabaab, xogahaas o”dhaliyay shaki iyo cabsi ku abuurmay shacabka Soomaaliyeed.
Madashu markay aragtay xogahaan halista ku ah amniga iyo jiritaanka Qaranka, markay dib u eegtay dhacdaooyinkii waaweynaa ee dalka ka dhacay sida dilkii Guddoomiyihii gobolka Banaadir ahaana Duqii caasimadda, Eng Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisoow (AU) iyo masuuliyiin kale. Madashu markay u kuurgashay hab-dhaqanka hoggaanka Hay’adda (NISA) waxay ku qanacday in xogahan aan la dhayalsan karin.
Hadaba, si loo xoojiyo kalsoonidii Umadda Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan ay ku qabeen Hay’adda (NISA), loogana saaro welwelka iyo walaaca taageerayaasha Dowladda Soomaaliyeed Madasha Xisbiyada Qaran waxay dalbaneysaa:
In baaritaan madax bannaan oo deg deg ah lagu sameeyo weerarkii ka dhacay Xarunta Gobolka Banaadir.
Xogaha la isla dhexmarayo baraha bulshada ee ku aaddan wadasheekaysiga taliyaasha labada aag ee Hay’adda (NISA) iyo Al-shabaab in lagu sameeyo baaritaan madaxbanaan oo dhamaystiran, si xaqiiqada jirta Ummadda loogu soo bandhigo.
In warbaahinta iyo baraha bulshada ee rasmiga ah ee Hay’adda (NISA) aan loo isticmaalin meel lagu fushado dano gaar ah laguna marin habaabiyo ra’yiga Shacabka, isla markaana lagu buunbuuniyo xubno katirsan Al-shabaab iyadoo laga leeyahay dano khaas ah.
In hoggaanka Hay’adda (NISA) laga fogeeyo siyaasiyiinta leh ujeeddooyin siyaasadeed loona dhiibo farsamo yaqaanno ku xeel dheer sirdoonka iyo amniga Qaranka.
Madashu waxay aad uga xun tahay in ciidamadii iyo saraakiishii Hay’adda (NISA) ee u carbisnaa nabadsugidda iyo sirdoonka laga sifeeyay Hey’adda, hoggaankeediina gacanta loo geliyay shakhsiyaad leh ujeeddooyin siyaasadeed taas oo keentay in Hay’addu ay ka habowdo shaqadeedi
Ugudanbayn Madashu waxay caddaynaysaa in warqaddii ku taariikhysnayd (17/04/2020) ee Dowladdu ugu jawaabtay warbaahinta Dalka Kenya inaysan ahayn jawaab ku filan Ummadda Soomaaliyeed iyo taageerayaasheeda Caalamka.
Madashu laba mid waa ku saxan tahay; inaysan warqaddan ku qorin wax la yiraahdo ”Beesha Caalamka”, waloow aynaan hubin karin inay hadhoow farriin-danabeedyo ugu diri doonaan iyo in kale.
Midda kale ee ay kun jeer ku saxan yihiin waa in aan hay’adda NISA loo dhiibin qof siyaasad shaqo ku leh ama siyaasi ah ama siyaasi ka goys haysta oo gaar ugu xiran, waayo waxaa iska hor imanaya danaha siyaasayeed ee gaarka ah iyo amaanka guud ee dalka.
Yeelkeede, marka la eego qodobbada lagu sheegay ”xiriirka” ee meesha ku qoran kuma xusna wax ka badan wararkii ay qoreen warqaadyada Kenya iyo waxyaabaha baraha bulshada la iskula wadaago, waayo caddayn ama war moowduuci u muuqda kuma qoran, waana arrin halisteeda leh in sidaa loo kalsooni tiro hay’ad qabanaysa howsha ugu xasaasisan qaranka, xitaa haddii tuhun jiro waxay ahayd inay adeegsadaan hillinnada hoose ee ay kula hadlayaan madaxda sare.
Waxaa intaa dheer, tan iyo markii dib loo unkay NISA, oo ay madaxda Madashu xilka sare hayeen wuu jirey xiriir dhex marayey Shabaabka iyo rag ka tirsan NISA ama DF marar badanna waa lagu khasban yahay, waayo haddii aan lala xiriirin madax iyo askar badan oo isa soo dhiibtey ama fikirkaa ka tanaasushey fursadda ay kusoo rujuuceen ma heleen.
Haddii uu xiriirku yahay mid aan dalka iyo dadka u daneeynayn in laga hor yimaado waa sax, laakiin qoraalka laguma sheegin nooca uu yahay ”xiriirka dhacay”, haddiiba uu jiro.
Sidaa darteed, ”xiriir ayaa jira” uun in eed laga dhigo iyadoo aan la sheegin nooca, sida, qofka uu khuseeynayey, goorta iyo goobta, wuxuu iska noqonayaa war u samaysan qaab fadhi ku dirir ah.
SOO JEEDIN – Waxaan madaxda xilka haysa iyo kuwa xilka doonayaba usoo jeedinayaa inaysan marna diiradda saarin dano gaar ah iyo kursi jacayl, ku darsi, wax tooxsi, marin habaabin umadeed iwm, waxaan ka hadlaynaa dal dhiig baxaya oo ay badbaadadiisu turaale iyo talo toosan u baahan tahay, taasoo aan nasiib xumo inta badan ka muuqanin siyaasadda Soomaalida, si kastaba se, ku dadaala inaad dhaxal reeb wanaagsan samaysaan, iskana tuura wixii kursi iyo hanyari ku salaysan, qof kursi uun ka fikirayaa waa halis, inta badanna umadda waa ku hor ceeboobaa, waayo mulkiga ILAAH ayaa bixiya, isaga ayaa QAADA, marka si wanaagsan hallugu doono.
Tan kale, marar badan ayaa la duraa hay’aadka qaranka, taasoo wiiqaysa geeddi socodka qaran dhiska dalka, waa run inay hay’aduhu iimo badan yihiin, balse waa inaan ogaannaa in dal kasoo kabanaya burbur 40 sano ihi aanu u dhaqmi karin sida Scandinavia iyo Japan.
Wixii khaldan halla toosiyo dalka iyo dadkana halloo muujiyo lexe-jeclo, waa nasiib xumo in marar badan ay mucaaradku u muuqdaan kuwo uun ku fooggan kursiga, sida aan qaarkood ka maqalnayna xitaa amaanka wax u dhimaya si ay taas ku gaaraan, waar hooy waa dab aad ku ciyaaraysaan waayo amaan xumo iyo khalkhal umadeed saldanaddii lagu helo lama calfado oo waannagii soo marnay oo aragnay.
Xikmadi ha jirto.
Previous articleDAAWO: Ruushka oo samaystay gaari ciidan oo kaligii is wadaya (Ma malayn kartid inta KM ee uu jeexay)
Next articleDAAWO: ”Dadka karoonaha qaba si kas ah ayaa loo KHAARAJIYAA!” – Gabar kashiftay waxa ka socda isbitaallada New York (Arrin murugo leh)